Nezvedu - Leadpacks (Xiamen) Environmental Protection Packing Co., Ltd.
Mon - Sat na7:00AM kusvika 11:00PM
Shopping bag / kutakura bhegi
Flat bag/ rolling bag
Leadpacks (Xiamen) Environmental Protection Packing Co., Ltd. yakavambwa muna 2009 uye yakazvipira kurongedza epurasitiki. Takatanga tsvakiridzo yemabhegi anoora muna 2014, uye takatanga zviri pamutemo kugadzirwa kwemabhegi anogona kucheneswa uye anogona compostable muna 2016. Isu tawaniswa zvakare nhevedzano yezvitupa zvine hukama DIN EN13432 certified, ISO certified, FDA test report, SGS, uye patents nezvimwewo.
Fekitari yedu inovhara nzvimbo inopfuura 6000 square metres uye ine michina yemagetsi inodarika makumi mashanu, kusanganisira michina yekufuridza mafirimu, michina yekudhinda ine mavara gumi nerimwe, michina yekugadzira mabhegi, nezvimwewo. Zivai zvizere kugadzira otomatiki. Izvi hazvingodzikisi mutengo wekugadzira nemitengo, asi zvakare zvinobudirira zvinovandudza kugadzirwa kwakanaka uye kunaka kwechigadzirwa. Rega vatengi vedu vawane mutengo wakanakisa uye nemhando yepamusoro uye sevhisi yakanakisa.
"Kugadzirwa Kwakachengeteka, Hunhu Hwekutanga" ihwo huzivi hwefekitori. Tine batch yevashandi vehunyanzvi vanoita chiitiko chekugadzira kwemakore mazhinji muindasitiri uye nyanzvi QC, tine vimbiso yakavimbika yemhando yepamusoro zvinodiwa, yepamusoro yemhando kukunda Mukurumbira wakahwina vatengi kubva kunyika makumi mashanu nesere nemaindasitiri akasiyana.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru 100% Biodegradable bags, Compostable bags, Plastic bag, Plastic kurongedza mabhegi, Shopping bag, Mailing bag, Zip bag, Zip lock mabhegi, Simuka pouches, Vacuum bag, Chikafu homwe, Mabhegi ekofi, Aluminium foil mabhegi, Marara. bhegi, Stretch film, Film rolls etc.
Kuti tisangane nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vakasiyana, isu tine nyanzvi yekugadzira timu, yekutanga-kirasi mitsara yekugadzira, uye 24-awa yepamhepo sevhisi. One-stop kurongedza sevhisi inogona kusangana nechero yako yekurongedza zvaunoda.
Vese vashandi vanokugamuchira iwe kushanyira uye kutungamira fekitori yedu.
Isu tinowanikwawo nhevedzano yezvitupa zvine hukama DIN EN13432 certified, ISO, FDA, SGS, uye patents nezvimwe.
Zvekubvunza Nezve Zvigadzirwa Zvedu, Ndokumbira Inzwi Wakasununguka Kutibata Nedu Nee-mail Kana WhatsApp, Tichakupindura Pakarepo.